Apple inotangisa yechitatu yeruzhinji beta yewatchOS 7 | Ndinobva mac
Apple inotangisa yechitatu yeruzhinji beta yeWatchOS 7
Apple yakatoita kuti iwanikwe kune vese vashandisi vakabatana neiyo beta tester chirongwa, iyo chetatu beta yeWatchOS 7. Iwe haufanire kuve unogadzira, nekuti iyi beta iri yeruzhinji. Zuva rimwe chete mushure mekutanga kweiyo beta yeiyo imwechete sisitimu yekushandisa, yevanogadzira, iyo kambani yeAmerica inotangisa yakavhurika vhezheni, kune vanhu vese, sekutaura.
Apple yakaburitsa ndeipi yechitatu yeruzhinji beta yewatchOS 7. Mune mwedzi akatoburitsa matatu akateedzana yeiyi nyowani yekushandisa system matinogona kuwana nhau senge itsva skrini, iyo stopwatch ye kugeza maoko chaiko (Inobatsira uye zvimwe izvozvi munguva dzino dzatakatofanira kurarama), yekurara nzira, nezvimwe.
Iwe unogona chete kuwana iyi beta kana iwe wakambonyoresa muchirongwa che beta testers. Asi zviri nyore kubatana naye Uye zvese zvaunofanirwa kuita kurodha pasi beta iyo ichaiswa pane iyo iPhone (iyo inofanirwa zvakare kuve iine iOS 14 beta yakaiswa) uye mirira kuti iyo update ivonekwe.
Kazhinji kugadzirisa kunowanzoitika otomatiki, kunze kwekunge iwe wasarudza yekutsvaga bhuku. Chero zvazvingaitika, kana iyo yekuvandudza isingaoneke, iwe unogona kuiwana, kubva kuiset iPhone: iPhone> General> Software kugadzirisa.
Iwe haugone kuona beta 3 parizvino. Iva nemwoyo murefu nekuti isu tatoziva kuti panguva yekuburitsa panogara paine tsaona kana kunonoka kusvika kumidziyo yese. Chekutanga pane zvese, ive shuwa kuti kana iyo beta yaiswa, hazviite kuti udzokere kune yapfuura vhezheni yeanoshanda system.
Sezvatinogara tichitaura, unofanira kuva nazvo chenjera nemhando iyi yesoftware iri mukuyedza, nekuti inogona kukonzera kutadza. Naizvozvo zvinokurudzirwa kuiisa pane chechipiri mudziyo, kwete pane chikuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inotangisa yechitatu yeruzhinji beta yeWatchOS 7
Apple TV nhepfenyuro + Invasion inotangazve kugadzirwa
Unogona kushandisa yako Olympus kamera seWebcam webhu pane iyo Mac